Tabaha ugu fiican ee Parchis STAR | Androidsis
DaniPlay | 08/04/2021 08:30 | Ciyaaraha Android
Ciyaaraha guddiga wali waxaa loo hayaa madadaalo mahadsanid xaqiiqda ah in dhowr qof ay ka qaybqaadan karaan. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay sharciyo u gaar ah, oo lagama maarmaan u ah inuu awood u yeesho inuu u ciyaaro si lamid ah inta kale ee asxaabta ah ee ciyaarta ka kooban, ha ahaato ciyaaraha kaararka ama dusha sare ee miiska.
Mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee caan ku ahaa sannadihii la soo dhaafay waa Parchis STAR, cinwaan caan ah oo bilaash ah oo ka socda Dukaanka Play-ka oo in ka badan 50 milyan oo soo degsasho ah. Waa codsi inaad waqtiyo wacan la qaadatid qoyska, asxaabta iyo dadka ka imanaya gees kale oo meeraha ah.
Waa cinwaan loo ciyaaro Parcheesi wadar ahaan afar taayil, waxaa lagu duudduubayaa laadhush 1 ilaa 6 qofkii yimaadda oo leh dhammaan shaararka guriga badhtanka guddiga ayaa guuleysan doona. Si tan loo sameeyo, waa inuu ka fogaadaa kuwa la tartamaya, taas oo kiiskan uu ku kala duwanaan karo iyadoo ku xiran ciyaarta.
1 Ku kasbo lacag qadaadiic ah
2 Kasbo lacag qadaadiic ah oo aan dhamaadka lahayn
3 Tirtir isticmaalaha martida oo abuur mid kale
4 Had iyo jeer ku guuleysto Parchis Star
5 Sida loo kasbado luul Parchis Star
6 Sida loo helo jawharad
7 GEMS bilaash ah oo kor u qaadaya Parchis Star
8 Si dhakhso leh kor ugu qaad Booster
Ku kasbo lacag qadaadiic ah
Daawashada Xayeysiiska: Parchis Star waxaa suurtagal ah in lagu kasbado lacag qadaadiic ah, si loo helo qaar ka mid ah waxaa ugu wanaagsan inaad awood u yeelatid inaad aragto ogeysiisyada maalinlaha ah, ugu yaraan in yar haddii aad rabto inaad haysato ugu yaraan kuwa aasaasiga ah. Si tan loo sameeyo, dhagsii qaab-dhismeedka bidix ee kore, waxaa jira shaqooyin qaarkood oo la qabanayo haddii aad rabto inaad hesho lacagta noocan ah. Fiidiyowyadu badanaa waa qiyaastii 30 ilbiriqsi oo waxaad daawan kartaa illaa 5-6 ilbiriqsi abaalmarintuna waa 250, 300, 350 iyo 500 oo dahab dahab ah.
Ciyaaraha guuleysta: Haddii aad si joogto ah ugu guuleysato ciyaaraha Parchis Star Tani ma noqon doonto nooc dhibaato ah, markaa waxaad heli doontaa lacag badan oo shilimaad ah. Haddii aadan haysan jajabyo uma badna inaad awoodid inaad ciyaartid ciyaaro, markaa waxaad marwalba u jeedsan kartaa inaad daawato xayeysiinta.
Ka ciyaar Horyaalka: Mid ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay inaad ka qeyb gasho League-ga waa inuu noqdaa ugu yaraan heerka 4, laga bilaabo Bronze League waxaad awoodi doontaa inaad tagto Titan League haddii aad fiicantahay. Lacagta aad ku guuleysaneyso waa badan yihiin oo midna kama waayi doontid inaad ka qayb gasho tartan had iyo jeer iyaga loo qaybiyo.
Kasbo lacag qadaadiic ah oo aan dhamaadka lahayn
Mid ka mid ah tabaha ansaxa ah ee Parchis Star waxay ku jirtaa adeegsiga barnaamij loo yaqaan 'Parallel Space', oo caan ku ah soo-saarista codsiyada, loo isticmaali jiray laba xisaab Twitter, Facebook, iwm. Waxaa loo isticmaali doonaa in lagu wareejiyo lacagta birta ah, iyo tabaha kale ee Parchis Star, maadaama ay tahay hawl fudud in la isticmaalo. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo nooca 64-bit, nooca 32-bit ku shaqeyn maayo arjiga.
Si tan loo sameeyo, rakib Parallel Space, u oggolow rukhsadaha kala duwan, dooro arjiga si aad uhesho, su'aasha ah tan Parchis Star, oo ah tan na danaysa, dhagsii "+" ugu dambayntiina dooro arjiga. Ka bilow Parchis Star ee Isbarbar Dhigga, Parallel Space ayaa ku weydiin doonta inaad soo dejiso nooca 64-bit ah, aqbal oo mar labaad dhammaan rukhsadaha sii.
Jilbaha 'Parchis Star' ee Parallel Star waa inaad ku ciyaarto marti ahaan, marna koontadaada caadiga ah si aad u awoodo inaad ogaato oo aadan soo jiidan dareenka. Guji qaabka ciyaarta, sameyso ciyaar cusub adoo gujinaya astaanta dhexe oo qor lambarka ku tusi doona, lambarka aad ku martiqaadi karto dadka kale, ama adiga kaliya aad kula ciyaarto akoonkan khiyaaliga ah.
Hadda yaree Isbarbar dhigga si aad uga furto barnaamijka 'Parchis Star Star' miiskaaga, guji habka ciyaarta saaxiibbada kuna qor lambarka ciyaarta aad duubtay. Markaad gasho, waxaad ku xirmi doontaa ciyaarta, markale Furan Is Barbar dhig, waxaad arki doontaa in astaanta taleefankaaga ay mar horeba ciyaarta ku jirto, iyadoo koontada martida lagu duubayo laadhuuga, marka tan la dhammeeyo riix «Back» si aad uga baxdo ciyaarta, taas oo muujinaysa farriin ah inaad lumin doonto lacagta qadaadiicda ah, laakiin waa waa kan la raadiyay, oo si isku mid ah ugu siinaya koontadaada ugu weyn.
Hadda koontada taleefankaaga gacanta ayaa lagugu qasbi doonaa inaad soo rogto laadhuuga, samee oo waxay ku tusi doontaa fariin ah inaad adigu guuleysato ciyaarta. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad heli doonto qaddar ah 500 oo qadaadiic ah, maaddaama 500 oo qadaadiic ah aan la tirin, laakiin kama lumin doontid markii aad la ciyaareyso marti aad kaligaa abuurtay.
Booska Isbarbar yaaca - Xisaabaadyo Badan
Tirtir isticmaalaha martida oo abuur mid kale
Hawl ay tahay inaan qabanno si uusan arjiga u baran waxa aan nahay ma aha inaan ka tagno wax tilmaam ah, waayo tan wax walbaa waxay u dhacaan in la tirtiro xogta Barxadda Isbarbardhiga. Waa khiyaano aad u fudud oo waxtar leh haddii aan dooneyno inaan helno qadaadiic aan dhammaad lahayn, maadaama ay tahay hawl qaadata ugu yaraan waqti.
Si tan loo sameeyo, samir oo qaado tallaabada xigta si aad u abuurto isticmaale kale oo marti ah oo aad lumiso oo aad dhibco siiso koontada ugu weyn. Parchis Star waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ciyaarto akownka martida Ama koonto la abuuray, waxaad isticmaali kartaa koontada Facebook ama emayl wata eray sir ah.
Soo gal Dejinta taleefankaaga gacanta
Raadi "Codsiyada", guji oo ka hel Meel Barxad ah, dhagsii
Hada kaydinta, guji "Clear data khasnado" iyo xogta dalabka
Tani waxay kaa dhigi doontaa inaad tirtirto wax kasta oo ka mid ah adeegsadahaas oo loo abuuray "Marti"
Tan waxaa lagu celin karaa inta jeer ee aad rabto, sidaa darteed waxaad ku guuleysan kartaa 500 oo shilin ciyaar kasta oo lagu ciyaaro qaab khiyaali ah. Qadaadiicdu waa lama huraan in lagu ciyaaro Parchis Star, markaa inaad haysato kumanaan iyo kumanaan waxaad la ciyaari doontaa asxaabtaada adigoon u baahnayn inaad aragto xayeysiis ama aad mar walba ku guuleysato ciyaaraha.
Had iyo jeer ku guuleysto Parchis Star
Had iyo jeer maskaxda ku hay fagaarayaasha aad u wareejineyso mid kasta oo ka mid ah dusgyada isla markaana hubi markasta oo aad awoodid, dhammaantood adigoon khatar gelin qolyaha la tartamaya. Si aad u cuntid jabinta ka soo horjeedka waxaa fiican inaad yeelato lambar sare, laakiin haddii aad dhowr yeelato waxaad yeelan doontaa dhaqdhaqaaqyo badan oo aanad cidna kaaga horreyn.
Had iyo jeer isku day inaad yeelato hal calaamadeyn ka dib mid kale munaasabaddaIn kasta oo had iyo jeer la daawado in qof kale oo kaa soo horjeedaa aanu gaarin aagga si uu u dilo ugu yaraan midkood, had iyo jeer dhabarkaaga si fiican u dabool. Ku hayso ugu yaraan laba jajab sanduuqa aaminka ah, sug inta kaa soo horjeedda inuu dhaafo oo haddii aad fursad u leedahay, cun.
Haddii aad koox ahaan ula ciyaartid lammaane kale marka hore hubso in labada midkood uu gaaro himilada, khiyaanada ugu wanaagsan ee Parchis Star waa in la cuno dhammaan jajabyada si loo horumariyo. Markuu mid yimaado, kan ku xiga wuxuu yeelanayaa dhaqdhaqaaq laba-laab ah leh mid ka mid duub oo mid kale, sidaas darteed hore u sii dhaqso badan doonaa. Isticmaalka luul waxaad beddeli kartaa mid ka mid ah gaagaaban, gaar ahaan haddii aad hesho 1 ama 2.
Sida loo kasbado luul Parchis Star
Mid ka mid ah waxyaabaha naga dhigi doona inaan yeelano wax ka badan hal orod waa inaan helno luul (loo yaqaan GEMS), waxaa lagu gaaraa adoo u diraya luul saaxiibbadaada Facebook iyo daawashada fiidiyowyada dalabka. Iyada oo luul ah waxaad sidoo kale ku heli kartaa qalab, ay ku jiraan laadhuu qaab kale, astaamo shaqsiyeed, iyo waxyaabo kale.
Maqaarka waxaad leedahay hal dhiirigelin oo dheeri ah oo aad ku sii wado inaad siiso Parchis Star muuqaal cusub si aysan u soo noqnoqon, sidaas darteed waxay ku habboon tahay ciyaartoydii rakibay muddo dheer ama kuwa cusub ee yimid. Haddii aad rabto inaad doorato ciyaar cusub oo laadhuu ah ama astaamo ah, u gudub xulashada aruurinta.
Sida loo helo jawharad
Kaqeybgalka League: Haddii aad rabto inaad kasbato GEMS, waxa lagaa rabo inaad sameyso waa inaad kaqeyb gasho League-ga, ikhtiyaarka aad sidaas ku sameyn karto wuu kala duwanaan doonaa, maadaama ay suurtagal tahay in lagu ciyaaro kuwa kala duwan. The Bronze League inkasta oo ay adagtahay, waxay noqon laheyd qasab in lagu sii jiro hadaad rabto inaad ku guuleysato dhagaxyo badan.
Abaalmarinta: Badhanka ku xigta dhagaxyada waxaad ka heli doontaa abaalmarinno gunno ah. Isu rogo laaluushka oo ku guuleyso abaalmarinno xiiso leh, oo lagu daray saaxiibbada ayaa kuu soo diri kara laadhuu. Abaalmarinnada waa kuwo naaqus ah waxaana loo isticmaalaa in lagu helo dhagaxyo badan, oo urursan doona kuwa badan dhammaadka maalinta haddii aad badanaa ciyaartid ugu yaraan dhowr kulan maalintii.
GEMS bilaash ah oo kor u qaadaya Parchis Star
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu helo dhagaxyo bilaash ah Parchis Star waa in kor loo qaado ciyaarta fiidiyowga ee Android ee Facebook, tan waxaad u heli doontaa abaalmarinno xiiso leh, oo ay ku jiraan jawharad. Tan darteed saaxiibbadaa waa inay kuu soo diraan laadhuus, sidoo kale waad diri kartaa haddii aad rabto haddii ay ciyaarayaan Parchis Star.
Dhameystirka horyaallada 'Parchis Star' waxaad heli doontaa boqolaal dhagaxyo, tan tan waa inaad u sameysaa mid kasta oo ka mid ah xilli ciyaareedyada horyaalnimadu socoto. The Bronze League waxaa loo arkaa horyaal tartan ah, laakiin maahan midka adag, maxaa yeelay waxaad la tartami kartaa kuwa kale ee kaa soo horjeeda.
Si dhakhso leh kor ugu qaad Booster
Hal dariiqo oo si dhakhso leh loogu simo waa iyadoo la adeegsanayo Booster, Muuqaal ka mid ah ciyaarta oo loo helo abaalmarin ahaan ama laga iibsan karo ciyaarta gudaheeda. Shaqada ugu weyni waa inaad isku dheelitirto si dhakhso leh, adigoo gebi ahaanba sharci ka ah Parchis Star.
Si aad u hesho faa iidada buuxda ee Booster, waxaa ugu wanaagsan inaad waqti badan u hurto markii aad dhaqaajiso, maadaama ay leedahay waqti lagu qiyaasay. Kiciyeuhu wuxuu si fiican uga dhigi doonaa inaad dhigato waqtiga aad hesho, sidaas darteed waa lagama maarmaan kuwa hadda bilaabaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Tabaha ugu fiican ee Parchis STAR